सर्वोच्चले सोध्यो – भाषा किन र कसले बिगारेको ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← आदिवासी जनजाति मन्त्रालय गठन गर्न सरकारसँग माग
होस गर्नुहोस् है, सांसद पद नै गुम्ला ! →
सर्वोच्चले सोध्यो – भाषा किन र कसले बिगारेको ?
Posted on 11/09/2016 by कुवेतनेपाल एडमिन | टिप्पणी छोड्नुहोस्
काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले नेपाली वर्ण विन्यास परिवर्तन गर्नुको कारण माग गरेको छ। न्यायाधीश जगदिश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले आइतबार कसले र किन भाषा संशोधन गरेको भन्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। अर्को सुनवाईमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा नयाँ भाषा वर्ण विन्यास अनुसार प्रकाशित भएका पाठ्यक्रम लगायत अन्य सरकारी निर्णय रोकिने छ।
भद्र शर्मा र टपेन्द्र कार्कीले गत शुक्रबार भाषा विगार्ने गरी वर्ण विन्यास तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले भाषाको परिवर्तन सम्बन्धी निर्णयको सम्पूर्ण जाकारी दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो। यसअघि अख्तियार र संसदमा पुगेको भाषा बिवादमा सर्वोच्चले हात हालेको हो।
अर्को सुनवाईमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा नयाँ भाषा वर्ण विन्यास अनुसार प्रकाशित भएका पाठ्यक्रम लगायत अन्य सरकारी निर्णय रोकिने छ।